I-Google Lungiselela Ukuqaliswa Kwabathengisi Ukuhlola | Martech Zone
I-Google Optimize iqalise nge-beta eqenjini elilinganiselwe labasebenzisi. Ngikwazile ukubhalisa futhi ngahamba ngepulatifomu namuhla futhi engingakusho nje - wow. Kunezizathu ezi-3 zokuthi ngikholelwa ukuthi lokhu kuzoba yisiphazamiso esikhulu emakethe yokuhlola. Eqinisweni, ukube bengiyisiteji sokuhlola, ngingahle ngiphume khona manje.
The isikhombimsebenzisi somsebenzisi iyahambisana namanye amapulatifomu afana ne-Google Tag Manager ne-Google Analytics, ngakho-ke uma usebenzise lawo mapulatifomu uzothola ukuzulazula kuGoogle Optimize umoya.
Ipulatifomu yakhelwe ngaphandle komthungo -Google Analytics, ekuvumela ukuthi usebenzise idatha yakho yesayithi ekhona ye-Google Analytics ukukhomba ngokushesha futhi kalula izindawo zesayithi lakho ezingathuthukiswa kuzo.
Akuve khulula. Kunezinye izici ezengeziwe ezitholakalayo ngeGoogle Optimize 360 ​​- njengokukhomba kwezithameli, ukuhlolwa okungenamkhawulo kwe-multivariate, izinjongo zokuhlola ze-Ad hoc, amakhono wokuhlola asezingeni elifanayo, amasevisi wokuqalisa, izivumelwano zeleveli yesevisi.
Njengawo wonke amanye amapulatifomu wokusebenzisa nokwenza kahle, i-Google Optimize isebenzisa ukumodeliswa kwezibalo ezithuthukile, nezindlela zezibalo ze-Bayesian ukumodela ukuhlolwa kwakho. I-Google Optimize isebenzisa amathuluzi wokukhomba asezingeni eliphakeme njengokukhomba kokuhlola okuthuthukile ukukuvumela ukuthi uthumele umuzwa ofanele kumakhasimende akho ngesikhathi esifanele.
Ungasetha ukuhlolwa kwe-A / B, Ukuhlolwa kweMultivariate, noma Ukuqondisa kabusha Ukuhlola:
Ipulatifomu idinga iGoogle Chrome ne I-Google Yenza ngcono isandiso sifakiwe… kodwa ngesizathu esizwakalayo. Esikhundleni sokugenca indlela yakho ngokusebenzisa ikhodi nezinto zekhasi, isandiso sikuvumela ukuthi uhudule futhi ubuyekeze izinto njengoba kudingeka.
Lokho kabusha kwethu Isiza se-ejensi esakhiwe ku-WordPress ngesizinda sevidiyo… futhi akunankinga noma yini usebenzisa i-Google Optimize! Qiniseka ukuthi ubhalisela!
Ukubika kunikela ngemiphumela nokuhlaziywa okujulile kwakho konke ukuhlolwa kwakho.
Bhalisela i-Google Optimize
Tags: ukuhlolwaucwaningoisilungisi se-googleukuhlolwa kwe-googleukuhlolwa kwe-multivariateukuthuthukisaukuhlolwa kwesizatesting
Ukuqondaniswa Kwezentengiso Nokumaketha: Izibikezelo Eziphezulu Zesikhathi Esizayo
Dec 2, 2016 ku-4: 24 AM
inothi nje: Kuyi- “Google Optimize”, hhayi i- “Google Optimizer” - ungahle uthande ukukulungisa lokho.
Dec 3, 2016 ngo-9: 25 PM
Ukubamba okuhle uChristoph! Ngiyabonga!